बिचरा नेपाली गोरा परिवार, भु’त भन्दै मान्छेले जि’स्काउछन् ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
April 24, 2021 AdminLeaveaComment on बिचरा नेपाली गोरा परिवार, भु’त भन्दै मान्छेले जि’स्काउछन् ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
गाउँका मान्छेहरु पहिले हामीलाई देख्दा अचम्म मान्थे भन्दै उनीहरु बताउछन् । काजोल महतो जेठी छोरी हुन् , यो भिडियोमा हामीले परिवारका ४ जना सदस्य संग कुराकानी गरेका छौ । परिवारले सुख दु’खका कुराहरु भा’बुक हुँदै गरेका छन् । आर्थिक अवस्था कम्जोर भएको गोरो परिवारमा सबैको आँखाको स’मस्या छ ।
आँखा राम्रो संग हेर्न नसक्नाले काम पनि कतै नपाएर कतिपय रात खान नखाई बसेको पनि उनले बताएकी छिन् । तलको भिडियोमा सम्पूर्ण कुराहरु देखिएको छ , सहयोग गर्नका लागि ९८१७०७०१६२ यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। भिडियो हेरेर धेरै भन्दा धेरै सेयर गरिदिन अनुरोध गर्दछौ । थप भिडियो हेर्न यहाँबाट क्लिक गर्नुहोलाः